ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ဂျပန်မှာကျောင်းတက်မည် အပိုင်း(၂)
Posted by ကြည်ကြည် at 12:14 AM
မင်းဧရာ July 31, 2011 at 12:30 AM
ကိုယ့်နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖတ်ရှူ့မှတ်သားသွားပါတယ်
နိုင်ငံ တကာအကြောင်းလေးတွေ ရေးပြီးတင်ပေးကြတော့
ကိုယ့် လူမျိုးတွေ သိထားရတာပေါ့
သွားခြင်သူများရှိရင် အဆင်ပြေပြေ သွားနိုင်ကြမယ်
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် July 31, 2011 at 5:23 PM
ဗဟုသုတတွေအများကြီးရသွားပါတယ်။ သိချင်တဲ့လူတွေရှိနေလို့ ဒီဆိုက်ကို ညွှန်းလိုက်ပါရစေနော်။
Monbusho scholar နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နဲနဲလေး လွဲနေသလားလို့.."မွန်ဘူးရှော စကောလာက အများဆုံး ၅ နှစ်ပဲပေးတဲ့ အတွက် ၂ နှစ်ကို မာစတာမှာသုံးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။ ၃ နှစ်နဲ့ မပြီးသွားတဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ...၁ နှစ် research နဲ့ နောက်၎ နှစ်ကို Ph.D. အတွက်အေးဆေးလုပ်နိုင်ကြတာ လည်းရှိပါတယ်။ "..Monbusho schlor က စစချင်း research student အနေနဲ့ လာရပါတယ်.. ရောက်ပြီး ၁-၂ နှစ် (Master ဆိုရင် ၂-နှစ်၊ Ph.D ဆိုရင် ၁-နှစ်) အတွင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ entrance ကို အောင်မြင်အောင် ဖြေရပါတယ်.. ၀င်ခွင့်အောင်လို့ Master/Ph.D ကျောင်းသားစဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေပြီး Master ဆို ၂-နှစ်၊ Ph.D ဆို ၃-နှစ် (Medical နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေမှာတော့ ၄-နှစ်) scholar ပေးသွားတာပါ.. Master ပြီးလို့ Ph.D ဆက်တက်မယ်ဆိုရင်လဲ သက်ဆိုင်ရာဘာသာအလိုက် ၃-၄ နှစ် scholar ထပ်တိုးပေးသွားမှာပါ... ဒါကြောင့် Monbusho scholar ဆိုရင် အနည်းဆုံး ၂-နှစ်(Master/ Ph.D ဆက်မတက်ပဲ ရိုးရိုး research student အနေနဲ့ပဲ နေတဲ့သူ) ကနေ ၇-၈နှစ် (research(2)+ Master(2)+ Ph.D(3-4)yrs)အထိနေလို့ ရကြပါတယ်..
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! August 1, 2011 at 1:01 AM
ဗဟုသုတတွေ အများကြိးရလို့ ကျေးဇူးပါမမရေ..
အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ သူတွေ စကောလာလျှောက်နည်းလေးသိပါရစေ. အသက်၂၅ ကျော်ပြီးလုပ်ငန်းခွင် အနည်းဆုံး ၂ နှစ်မရှိတဲ့ သူတွေအတွက် ပါ.
ကြည်ကြည် August 1, 2011 at 8:51 AM
ခု အစ်မရေးထားတာတွေဟာ အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်သူတွေအတွက် စကောလာလျှောက်နည်းပါ။ လက်၇ှိ မာစတာအဆင့်အတွက် စကောလာကတော့ လုပ်ငန်းခွင်လုပ်သက် ၇ှိရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအားလုံးရှိပါတယ်။ ဒီတော့ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ကြုံမရှိတဲ့သူအတွက်ကတော့ Monbusho ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးတဲ့ စကောလာ တော့ လျှောက်ကြည့်လို့ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်.. အသက်ကတော့ ၃၅ ထိ လျှောက်လို့ အကြုံးဝင်နေတာပဲလေ. လုပ်ငန်းခွင်အနည်းဆုံး ၂ နှစ်မရှိသူဆိုတာကတော့ အစ်မလည်း မသိပါ။ ပို့စ်မှာ အသေးစိတ်ရေးထားတဲ့ စကောလာ (ကိုယ်နားလည်တဲ့ စကောလာ) ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက်တွေမှာပါလို့လေ..
I wonder why you delete my previous comment.. I didn't mean to insult you and your post.. I just want to make it correct for the readers! sorry for my previous comment..
ကြည်ကြည် August 3, 2011 at 7:11 AM
I even did not understand what u mean. I have never deleted any comment and I won't delete any comment coz I am willing to see all comments to know every different opinions and different visions .
kokoseinygn August 5, 2011 at 9:44 PM
Anonymous August 7, 2011 at 2:29 AM
တော်လိုက်တာ ကြည်ကြည်ရယ်၊ ကြည်ကြည်က ဂျပန်ကအကြောင်းတွေ အရမ်းသိတာပဲနော်။
ကြည်ကြည် August 29, 2011 at 3:18 AM
spam ထဲမှာ ကော်မန့် တွေတွေ့လို့ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
မွန်ဘူးရှော စကောလာနဲ့ပတ်သတ်လို့ပါ .
ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်မှာ မွန်ဘူးေ၇ှာနဲ့ ၅ နှစ်ပဲ ရသွားတာတွေ ကို တွေ့ရတာတယ်
အရင်ကတည်းက research + master + Ph.D ဆိုပြီးလာတာကို မတွေ့ဘူးခဲ့ပါဘူး
မာစတာ (2 နှစ်) Ph.D3နှစ်